Cylind gbamgbam Puru, gbamgbam Puru akpa, Metal Ice ịwụ, Tinplate Box - Baolai
Chemical Industry gbamgbam nwere ike ma na gbamgbam ịwụ
20l gbamgbam ịwụ Top Colose Agba mbukota
Gburugburu udi kom kom With Agba Obibi
Square kom kom With Agba Printing N'ihi Car Agba mbukota
Top Open Now kom kom 6.3,10,15,20l
Kom kom N'ihi oriri Nri Oil mbukota
Kom kom With Agba Printing N'ihi oriri Nri Oil Mkpọ
Kom kom enweghị Agba Printing N'ihi oriri Nri Oil Mkpọ
Gbamgbam ịwụ N'ihi Ice ịwụ
Kom kom Accessary
6.3L mgbanaka chioma gbamgbam ịwụ N'ihi agba, Chemical Na ...
2.5L kom kom nri mezuwo oriri Oil camelli ...
Nwere ike ahaziri, anyị na-enye bụghị naanị nkwakọ akpa, ihe nwere ike mma nke ngwaahịa gị, adabara chemical agba, agba, ụgbọala agba, engine mmanụ, n'ígwè mmanụ, ink wụnyere.
Anyị ngwaahịa iche iche nkọwapụta zuru ezu, nke kacha mma mma, corrosion eguzogide, anyị na-agba ka i sonyere, ahịa mmepe na echiche ọhụrụ.
Manu nri, manu olive mmanụ wụnyere, na ojiji nke nri-ọkwa tinplate ihe onwunwe, ahụ ike, na ndị ọzọ environmentally friendly.
Ihe ọ bụla ị na-achọ iji nweta ma ọ bụ mepụta, anyị otu na-na-aka aka. Site elaborately ekara wụnyere na pụrụ iche na aghụghọ.
Dongguan Baolai Metal Puru Co., Ltd. ike na 2012, ọ bụ otu n'ime maara nke ọma tinplate nkwakọ containers emepụta na China. Main ngwaahịa bụ: oriri & chemical mmanụ ike, gburugburu, square na ndị ọzọ ụdị Mkpọ, zuru ezu iche na nkọwa. Anyị factory nwere ike R & D na nkà na ụzụ ike, elu na ngwá, nwere a otu nke agadi ọkachamara na oru pesonel. Nwere 12 elu ngwá mmepụta edoghi dị si Germany, Japan, Taiwan na mba ndị ọzọ, na 150,000㎡ ogbako na a kwa ụbọchị mmepụta ike nke ihe karịrị 100,000 PC.
Nke 1, heng n'okporo ámá, daohong ụzọ, daojiao obodo, Dongguan obodo, GuangDong Province, China
gbamgbam Box , Oil gbamgbam Puru , kom kom , gbamgbam ịwụ , gbamgbam akpa , Food Mkpọ ,